Hutano, 26 Zvita 2018
Chitatu 26 Zvita 2018
VaMnangagwa Vanovimbisa PTUZ Kugadzirisa Zvimwe Zviri Kunetsa Vadzidzisi?
Mutungamiri wenyika, VaEmmerson Mnangagwa, vanonzi vavimbisa hutungamiri hwesangano revadzidzisi, reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, PTUZ, kuti vachagadzirisa mamwe ematambudziko akatarisana nevarairidzi, kunyange hazvo vasina chinobatika chavataura panyaya yemari dzemihoro.
Zvita 20, 2018
Nyaradzo yaVaTsvangirai Ichaitwa Muna Kukadzi Gore Rinouya
Mhuri yevaimbova mutungamiri weMDC, VaMorgan Tsvangirai, yazivisa kuti nyaradzo yaVaTsvangirai ichaitwa musi wa14 Kukadzi gore rinouya.
Vakwegura Vanorangarirwa naVaChamisa Munguva ino yeZororo
Mutungamiri weMDC, VaNelson Chamisa, vasangana nevakwegura mazana manomwe vanobva muHarare neChitungwiza pamabiko ekupemberera zororo reKisimusi pamwe nekutendawo Musiki aitirwa mumusha weHighfield muHarare.
ARTUZ Inosvitsa Zvinyunyuto Zvayo Kuna VaMthuli Ncube
Vadzidzisi vekumaruwa vari pasi pesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, kana kuti ARTUZ, nhasi vasvitsa gwaro renyunyuto kugurukota rezvemari, VaMthuli Ncube, mushure mekufamba netsoka kubva kwaMutare kusvika muHarare vachiratidzira.
Paramende Yozeya Zvakabuda Muongororo yeMotlanthe Commission?
Paramende iri kutarisirwa kuzeya zvakabuda muongororo yemhirizhonga yakaita mushure mesarudzo zviri mugwaro rekomisheni yaitungamirwa nevaimbove mutungamiri weSouth Africa, VaKgalema Motlanthe.